शिव अधिकारी बिनाको सुनसान सुरुची टोल | साहित्यपोस्ट
पछिल्लो समयमा शिव अधिकारीले नेपालका खान्दानी राणाहरूको परिवारका कथाहरू आफ्नो कोलममा पस्किन थालेका थिए । उनले त्यस स्तम्भ मार्फत राणाहरूको रोचक जीवन कथा र नयाँ तथ्यहरू पस्कँदै आएका थिए र एकपल्ट उनले मसँग भनेका थिए, “शुरुमा रुट पहिल्याउन गाह्रो भो, अब त झन्झन् रोचक कुराहरू र नयाँ नयाँ पात्रहरू लाइनमा छन् । पछि यसलाई पुस्तकको रूपमा निकाल्नु पर्छ ।”
गोविन्द गिरी प्रेरणा	 आईतवार असार १४, २०७७ ०६:०० मा प्रकाशित
नेपाली साहित्यको इतिहासमा २०३९ सालमा घटित २ वटा विशेष घटना मेरा लागि विशेष स्मरणीय छन् । यौटा घटना हो, नेपाली यौन मनोविज्ञान साहित्यका प्रवर्तक साहित्यकार विश्वेशवर कोइरालाको निधन । अर्को हो, नेपाली साहित्य जगतमा कोसेढुङ्गा स्थापना गर्न समर्थ साहित्यिक पत्रिका साझा प्रकाशनबाट प्रकाशनको आरम्भ ।
गरिमा पत्रिकाका परिकल्पनाकार तत्कालीन साझा प्रकाशनका अध्यक्ष कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारी थिए । गरिमा नामाकरण उनैको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्दै भएको थियो ।
रूश्दीको जन्मदिन आज: द सटानिक भर्सेसले बदलेको जीवन
गोविन्द गिरी प्रेरणा	 शुक्रबार असार ५, २०७७ १६:२६
गोविन्द गिरी प्रेरणा	 आईतवार जेष्ठ ३२, २०७७ १०:१८
गरिमा पत्रिका प्रकाशनको निर्णय भएपछि यसका लागि सम्पादक नियुक्त हेतु खुल्ला विज्ञापन गरियो । साझा प्रकाशनमा कार्यरत कर्मचारी र बाहिरका सबैले प्रतिष्पर्धा गर्न मिल्ने थियो । साझा प्रकाशनमा कार्यरत कवि शिव अधिकारी त्यो पदका लागि दावेदार भए र आवेदन गरे । वासु रिमाल यात्रीको साहित्यिक पत्रिका विदेहका सम्पादकको रूपमा काम गरिरहेका हुनाले साहित्यिक पत्रिका सम्पादनको अनुभव भएकाले उनी दह्रो उम्मेदवार थिए । उनी गरिमाको सम्पादक हुनेमा ढुक्कै थिए । तर क्षेत्रप्रताप अधिकारीको रोजाइमा उनी पर्न सकेनन् । सम्भवत उनको कार्यशैली र कर्मचारीगत कतिपय कुरा उनलाई मन नपरेको हुँदो हो वा अरू कसैप्रति बढी रोजाइको झुकाव हुँदो हो । त्यो अरू कोही थिए, पाटन क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने, सडक कविता क्रान्तिका एक सहभागी कवि विष्णुविभू घिमिरे ।
यो नियुक्ति प्रकरणले शिव अधिकारीले आफ्नो स्वाभिमानमा धक्का पुगेको अनुभव गरे र उनले साझा प्रकाशनको साविकको पदबाट राजीनामा गरे । कुरा त्यतिमा रोकिएन । शिव अधिकारीले यो प्रकरणको विरोधमा पर्चा छापेर नयाँ सडक पीपलबोटमा वितरणसमेत गरे । यो उनको जीवनको टर्निङ पोइण्ट अर्थात् महत्वपूर्ण मोड सावित भयो । त्यो थियो उनको जागिरे जीवनको समाप्ति तथा स्वतन्त्र व्यावसायिक उद्यमि जीवनको आरम्भ ।
उनकी श्रीमती कवयित्री सरला विष्टका नाममा प्रकाशित लेखिका थिइन् । उनी राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्कमा काम गर्थिन् र त्यहीं कार्यरत कथाकार तथा दीपिका साहित्यिक मासिकका सम्पादक हरिशङ्कर अमात्यले प्रकाशित गरिदिएका थिए उनको कविता सङ्ग्रह “आकास बेली”, तर शिव अधिकारीको भने त्यतिबेलासम्म कुनै पुस्तक प्रकाशित भएको थिएन । झन् भएको जागिर छाडेपछि उनको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन । तर जागिर छोडेको केही समयपछि उनले आफैंले पहिलो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गरेका थिए “दिगन्त सारथी”, र आफैंले झोलामा राखेर साथी भाइहरूलाई बेचेका थिए ।
उनले यसै बीच पत्रकारितामा हात हाले र त्यसैलाई अघि बढाए । नेपाली काङ्ग्रेस निकट उनले ‘प्रो काङ्ग्रेस’ पत्रकारिता गरे । उनले शुरुमा ‘सुरुचि’ नामक खबर पत्रिका प्रकाशन गरेका थिए, पाक्षिक रूपमा | जसलाई उनले पछि दैनिक बनाए र अन्तमा साप्ताहिक बनाए | र सुरुचि नै शिव अधिकारीको पहिचान बन्यो, ब्राण्ड बन्यो ।
सुरुचि पाक्षिकका प्रकाशक स्वयम् थिए | सुरूचि दैनिकका प्रकाशक ‘सुरुचि प्रकाशन प्रालि’ थियो भने सुरुचि साप्ताहिकको प्रकाशक ‘सुरुचि प्रकाशन सहकारी संस्था लि.’ थियो । चालिसको दशकको साप्ताहिक पत्रपत्रिकाको रजगजको बेला सुरुचि थोरै सङ्ख्याका धेरै पढिने पत्रिकाको रूपमा प्रख्यात भयो ।
यस बीचमा उनको साहित्यिक लेखनले पनि गति लियो । उनी कवितामा मात्र सीमित भएनन् । उपन्यासहरू लेखे, पुँशचली, चेष्टा, आखेट । उनको “आखेट” उपन्यास निकै रुचाइएको थियो । उनले नाटक पनि लेखे । ईश्वर बरालको नेतृत्वको बेला नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उनको नाटक मञ्चन गर्यो र पुस्तकसमेत प्रकाशित गर्यो । तासको जामा र अरू तीन नाटक, त्रासदी मुद्राहरू, सिंहासन उनका प्रकाशित नाट्य कृतिहरू हुन् ।
उनी काङ्ग्रेसको दुई खेमामध्ये एक खेमामा थिए । उनी कम्युनिष्टलाई त यसै उसै पनि कोर्रा हान्ने शैलीमा कटाक्ष गर्थे, काङ्ग्रसकै विपरित खेमालाई पनि दोहोलो काढ्ने गरी आक्रामक लेखहरू लेख्थे । आफ्नै पत्रिकामा उनले लेख्ने कोलम एकदमै मन पराउनेहरूको एक जमात थियो भने पटक्कै मन नपराउनेको जमात पनि थियो । मन पराउने मानिसहरूहरूले उनको गद्य शैली, शब्द प्रयोग र ठेटिलो प्रस्तुति स्वाद मानेर पढ्ने गर्थे । मन नपर्नेहरूले पूर्वाग्रही, एकपक्षिय भनेर नाक खुम्च्याउँथे ।
पान उनको अम्मल थियो र हिन्दीमा कुरा गर्नु उनको अर्को रमाइलो पक्ष थियो ।
उनले लेख्दै गए, तर त्यसको पुस्तक निकाल्ने कार्ययोजना सफल नहुँदै उनी बितेकाले त्यो उनको किताब निकाल्ने सपना अधूरो नै रह्यो । ती रचनाहरू अखबारका पानाहरूमा इतिहास बनेर रहे ।
कहिलेकाहीं उनको राजनीतिक आशक्तिले बढी मुण्टो उठाउँदा एकप्रकारको एकलकाटे कुरा लेखिदिन पनि नहिच्किचाउने स्वभाव उनको कमजोरी थियो । नेपाली पुस्तक प्रकाशनको इतिहासमै सबभन्दा बढी आलोचित र विवादास्पद पुस्तक “आजका नेपाली कविता” को चौतर्फी आलोचना भयो, जसलाई मोहन कोइरालाले सम्पादन गरेका थिए र निकै विवादपछि प्रज्ञाप्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको थियो, नकारात्मक प्रकाशकीयसहित । कालिप्रसाद रिजाल जस्ता कवि र डा.केशव प्रसाद उपाध्याय जस्ता समालोचकले समेत आलोचना लेख छपाए । तर शिव अधिकारी एक्लैले मोहन कोइरालाको पक्षमा लेख्दा धेरैले त्यो लेखलाई रुचाएका थिएनन् ।
शिव अधिकारीले आफ्नो आस्थाको राजनीतिको नेताको हिसाबले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जीवनीमूलक पुस्तक पनि लेखे र रत्न पुस्तक भण्डारबाट त्यो प्रकाशित भयो ।
यौटा लेखक कुन रचनाले कालान्तरसम्म चिनिन्छ, त्यो हम्मेसी अनुमान गर्न गाह्रो नै हुन्छ । एक सय एक महत्वपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण रचना लेख्ने लेखक पनि अर्कै रचनाको ढाडमा टड्कारो बाँचिदिन्छन् । महाकवि देवकोटाले लेखेका सुलोचना, शाकुन्तल जस्ता महाकाव्य स्तरीयताको हिसाबले उच्च महत्वको छ, तर लोकप्रियतामा र जनप्रियतामा मुनामदनले सबैलाई उछिन्यो । महाकवि देवकोटा र मुनामदन पर्यायवाची बने । सुलोचना बनेन । शाकुन्तल बनेन ।
शिव अधिकारी कुन रचनाले चिनिएलान् ? कुन पुस्तकले उनको परिचय लामो समयसम्म बोक्ला ? त्यो भन्न मुस्किल छ ।
उनले गीति रचना एकदमै नगण्य गरेका छन् । उनलाई गीतकारको रूपमा चिनाउनु एकप्रकारको व्यङ्ग्य जस्तो पनि देखिएला । तर उनले लेखेको र योगेश बैद्यले गाएको एउटै गीत उनलाई कालान्तरसम्म चिनाउने रचना बन्ने हो कि भन्ने म अनुमान गर्दछु । उनको त्यो गीत कालजयी छ । कर्णप्रिय छ । त्यस गीतले बोकेको भाव सार्वकालीक छ । त्यो गीतका शब्दहरू यस प्रकार रहेका छन्:
मन्दिरमा छ तिम्रै तस्वीर लिएर जाऊ
जनम जनम नफुल्ने आँखा दिएर जाऊ
एक सुर वाँसुरीको विन्ती सुनेर जाऊ
छन् प्रेमका निशाना दिलमा मिटाइ जाऊ
एकलासको चितामा बत्ती निभाइ जाऊ
नातिकाजीको संगीतमा योगेश वीद्यले गाएको यो गीत चीरकालसम्म बाँचिरहने विश्वास लिन सकिन्छ । उनले लेखेका र प्रकाशित पुस्तक एकाधबाहेक हजारप्रति छापिएका हुन्, ती पनि अझै कतिपय पुस्तक पसल वा उनको घरमा पनि भेटिएलान्। तर यो गीतले यी हरफहरू लेखिरहँदासम्म २ लाख ३२ हजार श्रोता पाइसकेको छ । अल्पायुमै यो धरती छाडेका शिवले अनन्त आकाशबाट ती २ लाख ३२ हजार श्रोताहरूलाई कृतज्ञता जाहेर गरिरहेका होलान् ।
बानेश्वरको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सामुन्नेको काठमाडौं भक्तपुर राजमार्गको दक्षिणमा यौटा गल्ली छ, जसको नाम हो, सुरुचि मार्ग । यो मार्गको नामाकरण शिव अधिकारीकै पहलमा भएको थियो, जुन टोलमा उनको घर थियो । एकपल्ट नेपाल भरि नै सडकको नामाकरणको लहर चलेको थियो । कतिले आफ्नै नाउँमा सडकको नाम राख्ने पहल गरे, गराए । कतिले आफ्ना पिता माताको नाम उज्यालो बनाउन नामाकरण ग‍रे । शिव अधिकारीले भने आफ्नो “ब्रेन चाइल्ड” सुरुचि पत्रिकाको नामबाट त्यो टोलको नामका लागि पहल गरे । त्यो घरमा एक विहान शिव अधिकारीलाई भेटेको र सरला भाउजुको हातबाट अन्तिमपल्ट चिया पिएको मीठो सम्झना अझै ताजा छ, चिसो चिसो मौसमको बेला । त्यतिबेला अहिले जस्तो हुलहुाल थिएन त्यो टोलमा । घरहरू पनि जोडिइसकेका थिएनन् ।
तर अहिले त्यो घरमा शिव अधिकारी भेटिन्नन् । उनको देहान्त भएको लामो समय भइसकेको छ । शरला भाउजू पनि अध्यात्म मार्गमा लागेर भारतको दिल्लीमा बस्न थालेको लामै समय भइसकेको छ । छोरीहरूले पनि आमालाई साथ दिएका छन् । फगत् सुरुचि टोल सुनसान छ, रित्तो रित्तो छ, ‘सुरुचि टोल’ नामाकरण गर्ने शिव अधिकारीको अनुपस्थितिमा ।
२६ जून २०२०, बृन्दावन, भारत ।